Descenders: zvinyorwa zvitsva zvakagadziriswa zvemutambo wevhidhiyo | Linux Vakapindwa muropa
Descenders: zvinyorwa zvitsva zvakagadziridzwa zvemutambo wevhidhiyo
RageSquid uye Hapanazve maRobhoti ave achishanda pane yakanyanya mitambo yemavhidhiyo mutambo wezita unonzi Vanodzika. Ikozvino, ivo vane nyowani nyowani yakagadzirira nezvitsva zvachose zvemukati zvemukati zvinosanganisira izvo zvekuwedzera uye mamwe emabhasikoro ekusarudza kubva.
Izvi zvidzidzo zvekuvandudza hvakashanda padhuze nevamwe modders kubva munharaunda kuburitsa zvakakurumbira zvemukati senge nzira dzeAloda Lakes, Descenders Island, Iyo Sanctuary, MegaPark, Kushmuck4x, Idarkopf, nezvimwe. Kune rimwe divi, BikeOut 4 neNew Lexico zvakawedzerwawo, semamepu maviri ekutanga matsva.
ari BikeOut nhau ivo vakasiyana zvakanyanya nezvakagadzirwa pakutanga muDescenders uye ivo vanonyanya kunakidza.
Asi handizvo chete zvaunowana mune ino nyowani Descenders vhidhiyo yemutambo zvemukati. Mhando dzakasiyana dze mabhasikoro matsva iyo inowedzerwa kune iyo yaitove nayo kuitira kuti iwe usawanzofanira kushandisa bhasikoro Enduro iyo inouya nekumira. Zvino, kana iwe uchinge wawana wekutsigira, unogona kuchinjira kuHardtail kana kuDonwhill.
Zvakare iyo fizikiki ine simba yebhasikoro pachayo yakagadziridzwa kuti ivandudzike. Uye ikozvino ivo vaisanganisira matsva matsva kugadzira, senge Tabletop, Superman Seatgrab, Barspin, Tailwhip uye Tuck No Hander.
Mune izvi zvakavandudzwa Descenders iwe zvakare uchawana izvo Bowl Cam kamera modhi, iyo inopa kutarisa zviri nani paunenge uchitamba. Iwe unotoona anopfuura makumi matatu matsva echinyakare zvinhu zvekuvhura, akawanda mamwe maratidziro (zvese zvezvimwe zvinhu zvemakwara, zvebhasikoro pacharo, kana nharaunda), nezvimwe. Naizvozvo, ichi chihombe chiitiko.
Kana iwe uchifarira, unayo iripo zvese muHumble Store uye mune iyo Steam chitoro, kunyangwe pano isu tichigara tine fungidziro yeValve's ...
Tora Vanodzika - Enda kuchitoro cheStam (40% dhisikaundi, kukwidziridzwa kunoshanda kusvika Mbudzi 11, 2020)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Descenders: zvinyorwa zvitsva zvakagadziridzwa zvemutambo wevhidhiyo
KDE Kunyorera 20.08.3 inosvika neapp nyowani yemitambo yeArcade uye nezvimwe